I-Frenulum emfushane Kwabesilisa - Izeluleko Zezempilo Zamadoda Anesitayela | Amadoda aSitayela
Ukunakekelwa komuntu siqu
I-frenulum emfushane kumuntu
U-Alicia tomero | 31/05/2021 10:38 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Ezempilo
I-frenulum emfushane ingaba yinkinga enkulu kwabesilisa abathile, ikakhulukazi emikhubeni yobudlelwano bezocansi obenelisayo, lapho bengakwazi ukuhlehlisa okujwayelekile ijwabu. Kuyadingeka ukubuyekeza ngokuningiliziwe ukuthi ngesikhathi sokumiswa ikhanda lepipi noma i-glans kumele likhululeke ngoba isikhumba somthondo sihlehlisiwe ukuze sigcine ucansi olufunayo, uma kungekho ukuhoxa noma kuba nzima kuyisibonakaliso sejwabu elifushane noma i-frenulum emfushane lokho kuvimbela ukuhoxa okujwayelekile.
I-frenulum isiza ukubuyisa isikhumba sejwabu elisusiwe ibe sesimweni sayo esejwayelekile, imboze ubukhazikhazi lapho ipipi liphumule noma lisesimeni esibi. Kepha abantu abaningi abazi ukuthi bane-frenulum emfushane futhi lokhu kuholela ekwakhiweni nasezinkinga zokuya ocansini. Uma kukhulunywa ngalesi sifo kungabizwa"I-frenulum emfushane" noma "i-frenulum emfushane".
1 Yini i-frenulum?
2 Izimpawu zokuthola i-frenulum emfushane
3 Ukubuyekezwa nokuxilongwa nguchwepheshe
4 Ukwelashwa nezixazululo
I-frenulum iyisikhumba sesikhumba esime njengonxantathu etholakala ngaphansi kwegans, ngaphansi kwejwabu, nangaphansi kwepipi. I-frenulum isiza ukugcina ijwabu lisendaweni futhi lingaphezulu kwe-glans, okuthi uma ihoxiswa kuyasiza futhi ukubuyela endaweni yayo ejwayelekile.
Le ndawo yomuntu nayo "kuyindawo evuselelayo yokuzwela okukhulu", kusukela ngesikhathi sokuya ocansini le ngxenye ikhombisa injabulo enkulu nokuvuselelwa okuphindaphindiwe. Ukuthinta kwakho okuqhubekayo kungasiza ukudala injabulo eyengeziwe futhi ifaka isandla ekubukeni kwe-ejaculatory.
Izimpawu zokuthola i-frenulum emfushane
Ezimweni eziningi une-frenulum emfushane kungumphumela wento ethile yofuzo, kungazuzwa njengefa kusihlobo. Kwezinye izimo kungenzeka ukuthi lowo muntu uhlaselwe uhlobo oluthile lokutheleleka. Lapha i-frenulum ifinyelele ukuvuvukala okukhulu ne-fibrosis (ukuqina) kubangela i- frenulum ukunciphisa. Noma kungenzeka kube nokulimala noma ukuphuka kwe-frenulum kwesinye isikhathi futhi ngesikhathi sokuphulukiswa kwayo kufinyeziwe.
Umuntu ophethwe i-frenulum emfushane uvame ukuzwa ubuhlungu bokushaya indlwabu kanye nokuya ocansini. Uma i-frenulum imfushane kakhulu, ezimweni eziningi ingadala ukungakhululeki okungaka okungaholela ekungabini namandla. Kwezinye izimo izinyembezi zingabangelwa Ziba buhlungu ngisho zibangele ukopha.
Ukubuyekezwa nokuxilongwa nguchwepheshe
Uchwepheshe ophethe ukubuyekeza nokuhlola uzoba udokotela wezitho zomchamo, kuzoba nguyena ongakunika kangcono ukuhlolwa nokuphathwa ngempumelelo kwalolu hlobo lwesimo. Kuzobhekwa indawo lapho udokotela angakwazi ukuyishaya khona le ndawo futhi enze ukunyakaza kokubuyisa ijwabu ngaphandle kokuphoqa. Ukusuka lapha uzoqinisekisa ukusebenza kahle kwejwabu futhi uma udinga noma yiluphi uhlobo lokungenelela.
Ngamacala amancane ungajwayeza ukunyakaza okuningana futhi lapho i-frenulum inganikezwa ukuqina. Kubandakanya ukwenza ukuhlehla nokuqhubekisela phambili ukunyakaza kwejwabu ngosizo lwama-corticosteroid okhilimu ukuya ukunciphisa ukuvuvukala nezicubu ezincane ezijiyile. Ngale ndlela sizokwakha ukuqina futhi Kufanele uhambisane okungenani amasonto ama-4 kuye kwayi-6.
Ukuhlinzwa kungesinye isixazululo. Kuqukethe ukwenza imbobo encane enqamulelayo phezu kwe-frenulum emfushane ukuqeda ukungezwani kwayo. Kuzokwenziwa nge- i-anesthesia yendawo, ngokuya esibhedlela ngaphandle kokulaliswa esibhedlela futhi lapho kuzosetshenziswa khona umthungo ukuvala isilonda. Ezimweni lapho kune-phimosis kuzokwenziwa ukusoka, lapha ijwabu lizosuswa ngokuphelele, kuveze ikhanda le-glans.
Ngemuva kokuhlinzwa kufanele usebenzisa ukudambisa izinhlungu ukulawula izinhlungu. Ezinsukwini ezilandelayo, kuzokwelashwa nsuku zonke ukugeza indawo ngensipho namanzi nokufaka i-povidone iodine. Ngemuva kwalokho, indawo kuzodingeka ukuthi imbozwe ngokugqoka ukuze kugwemeke ukungqubuzana.
Udokotela uzolandela phakathi namasonto ngemuva ukuze kulandelwe ukuphulukiswa okuhle futhi kungabikho zinkinga zakamuva njengokuphuma kwegazi, ukutheleleka noma ukulimaza. Ngeke ukwazi ukuya ocansini kuze kube yilapho indawo iselapheke ngokuphelele, kuzodingeka ukulinda okungenani amasonto amane, kuya ngokuvela komuntu.
Kungenzeka kwezinye izimo kunamadoda afuna ukwenza ucansi onalesi sithiyo (i-frenulum emfushane) bangakwazi ezimweni eziningi ukudala izinyembezi endaweni noma ukudabuka ku-frenulum. Kulezi zimo, ukuqhuma kwenzeka futhi ngenxa yalokho kuphuma igazi noma ukopha. Kulezi zikhathi, ukwelashwa kwakhe kusasebenza i-frenulum iba mfushane kakhulu. Udokotela kuzodingeka enze ukuhlolwa uma kunesidingo sokuhlinzwa noma ukwelashwa ngama-corticosteroid cream. Uma ukuqhekeka kwalo kwenzeka ngengozi, amabanga okululama aphakathi kwamasonto amabili kuya kwamane, lapho kwezinye izimo ukuzwela kungalahleka.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » I-frenulum emfushane kumuntu
Izinto ongazenza nomlingani wakho
Kubiza malini ukuthola icici?
Thola izindaba zakamuva ngemfashini nakwindlela yokuphila yabesilisa ku-imeyili yakho.
Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ukudweba imifanekiso emzimbeni